Car Factory crankshaft, shirkado - Shiinaha Car crankshaft-saareyaasha
Mashiinka Crankshaft ee Perkins135 oo leh lambar Oem 31312730 qiimaha warshadda
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Perkins135
Saxsanaanta sare iyo iska caabin ah xirtaan
30 sano jir engine xirfadeed & qaybo cagaf soo saaraha
Dammaanad bixinta waqtiga-waqtiga ah
100% Xakamaynta tayada
Muunado ayaa la bixin karaa si loo tijaabiyo tayada
Waxaan sidoo kale bixinnaa:
Mashiinka Crankshaft ee ku habboon Perkins 1104 oo leh Oem Number Zz90238 qiimaha warshadda
Xoogga crankshaft waa mid aad u adag. Waxay ku shaqeysaa hoosta ficil isku dhafan ee xoog gaas xilliyeed isbeddelaya, xoog aan firfircooneyn iyo daqiiqad xoog ah, waxayna leedahay culeysyo isdaba-joog ah oo foorarsi ah Sidaa darteed, crankshaft waxaa looga baahan yahay inuu yeesho tabar daal iyo adkaansho ku filan oo uu kaga hor tago foorarsiga iyo deditaanka; joornaalku waa inuu lahaadaa dusha dhalid ballaaran oo ku filan isla markaana xirta iska caabin. Waxaan bixinaa crankshafts baabuurta Perkins asalka ah, Perkins kala duwan oo buuxa, crankshafts cusub. Waxaan leenahay wax soo saar xoogan, waqtiga dhalmada oo gaaban, waxaan damaanad qaadi karnaa keenista alaabada, waxaanan soo dhaweynaynaa macaamiisha si ay ugala xaajoodaan ganacsiga. Waxaan sidoo kale bixinnaa la-tashiga alaabada si loo daboolo baahiyahaaga.
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Renault R4
Gaariga cusub ee loo yaqaan 'crankshaft' wuxuu ku habboon yahay Renault291
Wax soo saarku wuxuu ka samaysan yahay bir xoog badan iyo bir been abuur ah, waxaana lagu daaweeyaa tiknoolajiyadda xoojinta dusha sare si loo hagaajiyo awoodda daalka ee crankshaft. Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, koronto-dhaliye set tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, habsami, dhalaal iyo adkeysi kadib marka la dhammeeyo. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Gawaarida tayada sare leh ee gawaarida ayaa ku habboon Renault1.9F8T
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Renault1.9F8T
Mashiinka Crankshaft ee loo yaqaan 'Perkins1103' oo leh lambar Oem zz90078 / 4181V107 qiimaha warshadda
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Perkins1103
Intii aan ku sii soconay kobcinta joogtada ah ee alaabada, had iyo jeer waxaa naga go'an inaan siino dadka isticmaala khibrad adeeg tayo sare leh.
Halku-dhigga ah "mid ku habboon, adeegga wadnaha" iyo fikradda "xirfad-yaqaannimo, nabadda maskaxda, iyo ixtiraam", waxaa naga go'an inaan u abuurno noocyo kala duwan oo tayo leh nolosha qaybaha dadka isticmaala.
Waxqabadka kale ee Crankshaft ee moodooyinka baabuurta ee soo socda
Ganacsadeena ugu weyni waa inaan siino adeeg habaysan
waxaan ku siin adeeg gaar ah oo ku saleysan tusaalahaaga ama sawirkaaga
Qiimaha waa lagu qiyaasi karaa haddii aad u diri karto Stroke - joornaalka rod - width joornaalka joornaalka - joornaalka weyn - ballaca weyn ee joornaalka - dhererka guud - dhalada saxan faneedka - ballaca u dhexeeya dhalada saxanka saxanka iyo sawirka
Qalabka gawaarida gawaarida gawaarida ee Perkins GDA 404 oo leh lambar Oem ah 115256750 qiimaha warshadda
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Perkins404
Gawaarida tayada sare leh waxay ku habboon yihiin Perkins403 oo leh Oem Number 115256950 qiimaha wajiga
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Perkins403
Tayada gawaarida tayada leh ee Toyota3RZ
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Toyota3RZ
Crankshaft waa qaybta ugu muhiimsan ee matoorka. Waxay iska caabbisaa xoogga lagu soo gudbiyo usha isku xira waxayna u beddeleysaa wax soo saar xawli ah iyada oo loo marayo crankshaft waxayna ku kaxaysaa qalabka kale ee mashiinka si ay u shaqeeyaan. Crankshaft waxaa lagu soo rogay xoogga bartamaha wareega, isbeddelka gaaska xilli-xilliyeedka iyo xoogagga is-celinta, taas oo ka dhigeysa culeyska goos gooska ah ee lagu soo rogay culeysyo foorar iyo torsional. Sidaa darteed, crankshaft-ka waxaa looga baahan yahay inuu yeesho awood iyo adkeyn ku filan, dusha sare ee joornaalkuna wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid xirata adkaysi, si siman u shaqeeya, iyo dheelitirnaan wanaagsan.
Wax soo saarku wuxuu ka samaysan yahay bir xoog badan iyo bir been abuur ah, waxaana lagula dhaqmaa tiknoolajiyadda xoojinta dusha sare si loo hagaajiyo awoodda daalka ee crankshaft.It wuxuu ku habboon yahay baabuurta, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinada beeraha, matoor qaate quality tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, jilicsanaanta, dhalaalka iyo adkeysiga ka dib dhammaadka. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Gawaarida gawaarida caadiga ah ee loo yaqaan 'Toyota2Y'
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Toyota2Y
Si loo yareeyo cufnaanta crankshaft iyo xoogga bartamaha ka dhalata inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa, joornaalka crankshaft waxaa badanaa laga dhigaa meel bannaan. Godadka saliidda waxaa laga sameeyaa dusha sare ee joornaal kasta si loo fududeeyo soo-saarista ama soo saaridda saliidda mishiinka si loogu nadiifiyo dusha sare ee joornaalka. Si loo yareeyo isku-buuqa culeyska fekerka, kala-goysyada joornaalka ugu weyn, pin crank iyo gacanta garabka ayaa dhammaantood ku xiran qaanso kala-guur.
Gawaarida gawaarida ee tayada sare leh ee Toyota2RZ
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Toyota2RZ
Shaqada miisaanka crankshaft ee miisaanka culus (sidoo kale loo yaqaan miisaanka culus) ayaa ah isku dheelitirka xoogga wareega wareega iyo isku darka, mararka qaarkoodna waxay sidoo kale dheelitiri kartaa xoogagga isu-celinta iyo is-beddelka. Marka xoogaggan iyo xilliyadan ay iskood isu dheellitiraan, miisaanka culus ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu yareeyo culayska saaran culayska ugu weyn. Tirada, cabirka iyo meelaynta miisaanka miisaanka waa in loo tixgeliyaa iyadoo loo eegayo arrimo ay ka mid yihiin tirada makiinadaha mashiinka, qaabeynta silsiladda iyo qaabka crankshaft. Miisaanka miisaanka ayaa guud ahaan lagu dhex daraa crankshaft iyadoo la shubay ama la been abuuray. Miisaanka tamarta sare ee miisaanka naaftada ah ayaa si gaar ah looga soo saaraa crankshaft ka dibna waa la isku dhejiyaa.
Gawaarida tayada sare leh, oo ku habboon Toyota 2RZ, tayada warshad asalka ah, hal sano oo dammaanad ah. Nidaamka adeegga iibka kadib oo kaamil ah ayaa ku siin doona taageero farsamo Macaamiil gudaha ah iyo mid shisheeye si aad wax u weyddiiso una booqato warshaddeena.